Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Costa Rica » Fa maninona no olom-pirenena safidiny daholo ny Costa Ricans?
Vaovao Mafana • Karaiba • Vaovao Mafana Costa Rica • Vaovao Mafana El Salvador • Vaovaom-panjakana • Guatemala Breaking News • Vaovao Mafana Honduras • Vaovao • Vaovao Mafana Nicaragua • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nikaragoa, Costa Rica dia mizara ny tantaran'ny Andro Guanacaste androany, toerana iray ankafizin'ny mpitsidika sy ny mponina ao Costa Rica
Mankalaza ny Andro Guanacaste ny Repoblika federaly amerikanina
Ny fitsipiky ny Espaniola tany afovoan'i Amerika dia nifarana tamin'ny 1812 taorian'ny Ady Fahaleovantenan'i Meksika. Tamin'ny 1824, Costa Rica dia anisan'ny Repoblika federaly Amerika afovoany, miaraka amin'ny fanjakana hafa toa an'i El Salvador, Guatemala, Honduras, ary Nikaragua.
Fetin'ny besinimaro any Costa Rica ny Andro Guanacaste, ankalazaina ny 25 Jolay. Amin'ny hetsika natao hamelomana ny sehatry ny fizahantany aorian'ny areti-mandringana COVID-19, ity fialantsasatra ity dia hafindra amin'ny alatsinainy manaraka manomboka amin'ny 2022
Fantatra amin'ny anarana hoe 'Annexation of Nicoya Day' (La Anexión del Partido de Nicoya), androany dia manamarika ny fampifangaroana an'i Guanacaste tamin'ny 1824 rehefa lasa ampahany tao Costa Rica ilay faritany.
Ny faritr'i Guanacaste dia ao Nikaragua ary mifanila amin'ny faritra avaratry Costa Rica. Tao amin'ireo tanàna telo lehibe tao Guanacaste dia nisy ny fivoriana misokatra miresaka ny fifindrana avy any Nikaragoà mankany Costa Rica. Nisy fitsapan-kevi-bahoaka nantsoina mba hanapa-kevitra ny amin'izay hatao. Tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka, Nicoya sy Santa Cruz nifidy eny ny hiditra ao Costa Rica, raha i Liberia kosa nifidy ny hijanona miaraka amin'i Nikaragua. Ny valiny ankapobeny dia ny fanohanan'i Costa Rica.
Ny Repoblika Federalin'i Amerika Afovoany dia nandany ny lalàna ary nanasonia azy tamin'ny 25 Jolay 1824, namela ny Faritanin'i Guanacaste ho tonga ao amin'ny faritanin'i Costa Rican.
Isan-taona, ny 25 Jolay, ny mpitsidika iray dia mahatsikaritra zavatra kely samy hafa mitranga. Tsy mianatra ny ankizy mianatra. Nakatona ny banky, ny biraom-panjakana ary ny toeram-piasana hafa. Miakanjo ny olona - ary indrindra ny ankizy kely akanjo mahazatra (akanjo mahazatra, mazàna amin'ny karazany mena, fotsy ary manga).
Mistery, voavaha: Androany "Andro Guanacaste" na ara-dalàna kokoa izao, fankalazana ny "la Anexión del Partido de Nicoya" (ilay "Fanambarana ny Guanacaste").
Mahafinaritra tokoa ny fialantsasatra eto Tamarindo, satria any amin'ny faritanin'i Guanacaste no misy anay - ny ivon'ny fankalazana ny andro. Izany dia nilaza fa ny Andro Guanacaste dia fialantsasatra lehibe manerana an'i Costa Rica, fa tsy any Guanacaste ihany: Andro fialantsasatra ofisialy manerana ny faritany fito rehetra. Manome voninahitra ny andro nahatonga ny saikinosy antsika - faritany ankehitriny - lasa ampahany amin'i Costa Rica. Andro fankalazana izao.
Nanomboka taonjato maro lasa izay…
Androany dia tsy manomboka anio fa taona maro lasa izay - taonjato maro lasa izay, raha ny marina, fony nanjanaka voalohany ny faritra fantatsika ankehitriny hoe Amerika Afovoany i Espana. Teo anelanelan'ny taona 1500 (fanjanahana) sy ny voalohan'ny taona 1800 (fahaleovan-tena), i Amerika Afovoany dia nisy faritany espaniola maromaro. Faritany roa toy izany: ny Faritanin'i Costa Rica sy ny Faritanin'i Nikaragua.
Nandritra io vanim-potoana io, ny Partido de Nicoya - faritra iray izay androany, manakaiky ny ankamaroan'ny faritany Guanacaste any Costa Rica - novaina ny tsy fivadihana amin'ireo faritany roa any Costa Rica sy Nicaragua. The fety nilalao ihany koa tamin'ny fizakan-tena ara-politika - mazava ho azy, miaraka amin'ny fahatokiana faratampony amin'ny renivohitr'i Amerika Afovoany any Goatemalà.
Nandritra ny taonjato telo, ny Partido de Nicoya dia namolavola ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra amin'ny Faritany Costa Rica. Ka tamin'ny 1812, rehefa niantso ny solontenan'ny faritany hanatrika ny Cortes de Cádiz (Fitsarana Cadiz) i Espana dia nifidy ny handefa ny solontenany miaraka amin'ny federasiona Costa Rican i Nicoya. Teraka ny firaisambe ofisialy.
Tsy ampy folo taona taty aoriana, tamin'ny 1821, lasa Amerika Afovoany mahaleo tena avy any Espana. Tamin'ny 1824, Amerika afovoany dia nanangana firenena mahaleo tena, ny República Federal de Centroamérica, raha tsy izany dia fantatra amin'ny anarana hoe Repoblika Federalin'i Amerika Afovoany.
Guanacaste: Safidy mahaleo tena
The Partido de Nicoya dia teo am-piandohana: hiditra ao amin'ny Repoblika Federalin'i Amerika Afovoany ho anisan'ny faritany mahaleo tena any Nicaragua ve ianao, na ho anisan'ny faritany mahaleo tena Costa Rica?
Tamin'izany fotoana izany dia niatrika herisetra sy ady ara-politika i Nikaragoa. Costa Rica kosa dia nilamina kokoa. Ankoatr'izay, ny fifandraisana ara-barotra eo amin'i Costa Rica sy ny fety mbola matanjaka (ary mihamatanjaka).
Saingy mazava ho azy, tsy dia mazava ny raharaha: nisy ny fifamatorana ara-politika sy ara-tsosialy tamin'ireo faritany mahaleo tena. Ka, rehefa nanolotra fanasana geopolitikika i Costa Rica Partido de Nicoya, Niantso vato i Nicoya.
Ireo tanàna telo lehibe an'i Nicoya - Villa de Guanacaste (Liberia ankehitriny), Nicoya, ary Santa Cruz - dia nandany volana maromaro tamin'ny 1824, nifanakalo hevitra momba ny mety hitranga. Tamin'ny farany, Nicoya sy Santa Cruz nifidy eny: The Partido de Nicoya hanao annexie an'i Costa Rica.
Ny daty dia Jolay 25, 1824.
Fankalazana ny fandriam-pahalemana
Androany, Costa Rica dia maneho ny fandriampahalemana sy ny demokrasia
Androany ary isaky ny 25 Jolay, manerana an'i Costa Rica, mankalaza faritra iray isika fanapahan-kevitra milamina (sy demokratika) hiditra amin'ny firenenay milamina (sy demokratika).
Fihetseham-po henonao na aiza na aiza ary matetika: “de la patria por nuestra voluntad ” - "Costa Rican amin'ny safidy." Costa Rican izahay satria nifidy ny hanao izany, ary faly amin'ny safidy. Ary noho izany, anio, mety handre zavatra betsaka ianao mozika, jereo vitsivitsy afomanga, ary kitiho ny sasany amin'ny tongotrao dihy nentin-drazana nentim-paharazana. Raha tsara vintana ianao dia mety hisambotra a matso.
Ary raha mbola eo ianao, aza adino ny mandray tanana malemy tortilla ary vera iray an'ny ranom-boankazo. Fomban-drazan'ny Guanacaste feno rehareha izy ireo!